किन मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी थुप्रिए सुरक्षाकर्मी ? – Rastriyapatrika
किन मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी थुप्रिए सुरक्षाकर्मी ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय अगाडी आईतबार बिहानै देखि सुरक्षाकर्मी तैनाथ थिए। दुई घेरा बनाएर पहरा दिइएको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी थियो भने दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी तैनाथ थियो। उत्तिकै संख्यामा मुख्य गेट भित्रपट्टी पनि सुरक्षाकर्मीको तैनाथी थियो।
निकै चनाखो भएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको मुल गेटमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीलाई झट्ट हेर्दा लाग्थ्यो कि एकछिनमा त्यहाँ ठुलै आन्दोलन हुदैछ। त्यहाँ तैनाथ भएका सुरक्षाकर्मीको नेतृत्व गरिरहेका उच्च अधिकारीहरु आफ्ना हाकिमलाई ओकेटोके सेटमा भन्दै थिए, अहिले सम्म कोही पनि आईपुगेका छैनन्।
प्रहरीको यो शब्द सुन्दा लाग्थ्यो कि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी आन्दोलन वा प्रर्दशनका लागि कुनै समूह आउदैछ। तर बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजे (३ घण्टा) सम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयको मुख्य गेट अगाडी तैनाथ भएका सुरक्षाकर्मीले न आन्दोलनकारीको सामना गर्नुय¥यो न त प्रर्दशनकारीको नै।
त्यो त उनीहरुका हाकिमहरुले हल्लै हल्लामा मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी लगाईदिएको मेलामा परिणत भयो। आखिर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय अगाडी बिना अर्थमा झण्डै ३ घण्टा सम्म सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्नुको कारण के थियो त ? सबैको मनमा हुटहुटी चलेको थियो।
यस्तो थियो कारण
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ बर्षिय किशोरी निर्मला पन्तका लागि न्याय माग्दै आन्दोलनमा रहेको अधिकारकर्मीको टोलीले यसअघि नै आज धनगढीमा विरोध प्रर्दशन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो।
यसअघि पनि पटक पटक मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई भेटेर न्यायको गुहार गरिसकेका अधिकारकर्मीहरुले धनगढीमा प्रर्दशन गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई समेत भेट्ने कार्य तालिका थियो। तर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफू संघिय राजधानी काठमाडौँमा रहेकाले समय दिन असमर्थ भएपछि अधिकारकर्मीको कार्यक्रम स्थगीत भएको थियो।
तर कैलालीका सुरक्षा अधिकारीहरुले सूचनालाई पुष्टि नगरीकन मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेका हुन्। कैलालीका प्रहरी प्रमुख आभुषण तिम्सिनाले दिनेश खबरसँग भने, मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी प्रर्दशन हुने खबरका आधारमा सुरक्षार्थ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको हो। मुख्यमन्त्री दिएनन अधिकारकर्मीलाई समय
शनिबार काठमाडौँमा रहेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट आइतबार भने कार्यालयमै थिए। तर कञचनपुरकी अधिकारकर्मी मिना भण्डारीले मुख्यमन्त्रीले काठमाडौँमै रहेको भन्दै समय दिन नसक्ने जनाएपछि प्रर्दशन र भेटघाटको कार्यक्रम स्थगीत गरिएको बताईन्।